$50 Million ayey ku xiran tahay dhismaha Ciidamada Cirka Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar $50 Million ayey ku xiran tahay dhismaha Ciidamada Cirka Soomaaliya
Muqdisho (Caasimadda Online) – Warbixin sanadkii hore uu Bangiga Adduunka ka soo saaray dhaqaalaha ku bixi kara amniga Soomaaliya waxaa lagu sheegay in Muqdisho u baahan tahay ilaa 10 Milyan oo Dollar si ay u dhisato Ciidamada Cirka 10-ka sano ee soo socota. Hadda 170 qof ayaa u qoran Ciidamada Cirka, mana heystaan wax qalab ah.
Bangiga Adduunku waxaa uu ku taliyay in canshuurta kor loo qaado si qarashkaasi u soo xaroodo, awoodda ciidamadana, gaar ahaan kuwa cirka, loo dhiso. Bangigu waxaa uu qarashka ku baxaya amniga gudaha ku qiyaasay sanadkii $150-220 million.
Mar uu ka hadlayey horumarinta Ciidamada Cirka, waxaa uu sheegay Bangigu in loo baahan yahay qarash dhan $50 million muddo 10 sano ah.
Taariikh ahaan, Soomaaliya waxaa ay laheyd Ciidamo Cir iyo diyaarado military oo ay ku jiraan diyaaradaha guuxa ka dheereeya iyo helicopters.
Ciidanka Cirka: Tirada guud ee Ciidanka Cirka waxaa ay ahaayeen 1,000 askari, tirada duuliyeyaasha 40, nooca(MIG 19, 29 xabbo iyo 15 duuliye), nooca MIG-21(11 xabbo iyo 9 duuliye), nooca MIG 17/15(13 xabbo iyo 6 duuliye) iyo diyaaradaha wax-daabula noocyada G-222, AN-24 iyo AN-26 min labo xabbo, qeybtan dambe 10 duuliye ayay lahaayeen.